Farmaajow Timirtii horaba dab loo waa!! | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajow Timirtii horaba dab loo waa!!
Farmaajo, intii uu xaafiiska joogay wuxuu ku ciyaaray heybaddii qeybaha kala duwan ee ciidanka, wuxuu Boolis, Milatarai iyo Nabad-sugidba u adeegsaday, danihiisa gaarka ah, wuxuu ka leexiyay shaqadoodii amni wuxuuna cadow uga dhigay dadka mucaaradka ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Farmaajo oo shan sano ku jiray xaafiiska ugu sarreeya dalka, fidno siyaasadeed mooyee aan fiyoobi ka tilin, ayaa xalay saq dhexe ku dhawaaqay inuu yahay musharrax u taagan in mar kale loo doorto kursiga Madaxweynaha.
Farmaajo wuxuu afar sano ka hor sheegay in uusan dib isku sharrixi doonin, marka uu dhameysto muddo xileedkiisa, yeelkeede, qof kasta ayaa ogaa kursi jacaylkiisa, waana lagu baraarugsanaa in ballan-qaadkaas aan beyd run ka ahayn oo uu ka bixi doono.
Ma jiro hal qodob oo uu hir galiyay dhamaan qodobbadii uu ballaan qaaday 2017, ma jirto shaqo Dowladeed oo muuqatay intii uu xaafiisa joogay, waa yaabka yaabkiise, muxuu doonayaa in dib loogu doorto?, Baarlamaankana muxuu ka hor sheegi doonaa?
Mandate-ka Farmajo, waxaa qeyb ka ahaa, dhameystirka dastuurka, la dagaallanka Al-Shabaab iyo in amniga lagala wareego AMISOM, hirgalinta doorasho qof iyo cod ah, dib u heshiisiin, daadajinta Faderaalka iyo wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Intaas, ma jirto wax laga qabtay, mid kasta wuxuu ka sii hooseeyaa halkii uu ugu yimid shan sano ka hor, kaliya wuxuu ku doodayaa inuu guryo dhisnaa kallar mariyay, dib uu u abuuray kooxihii xogagga wadaniyiinta oo dadka isaga ka aragtida duwan af-lagaadeeya.
Ma jirto rajo uu Farmaajo dib ugu soo laaban karo, wuxuuna ku baraarugsan yahay, awooda dabeysha is baddel doonka ah ee hor taalla, taasoo meesha ka saartay shaqsiyaadii uu dhisiyay doorashooyinkii guddoonka Golayaasha Baarlamaanka 11-aad ee JFS.
Maalgaliya-yaashiisii 2017, [QATAR], waxa ay wararku sheegayaan in ay musharrax kale dhisayaan, xilli kutladdii NISA, kala firxatay oo musharrixiin kale u kala xaroodeen, taasoo ay sii dheer tahay in go’aan kama danbeys ah laga soo saaray kuraasta gobolka Gedo.
Lix maalmood ayaa ka dhiman nolosha siyaasadeed ee Farmaajo, marka loo eego ku sii jiritaankiisa madaxtooyada, wuxuuna wixii Axadda soo socota ka danbeeyay u diyaar garoobi doonaa inuu ka guuro, guriga dalka looga taliyo ee Villa Somalia.